'ओलीलाई हटाउन तीन दल तयार, अबको प्रधानमन्त्री को ?'
काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिन तीन दलको प्रयास जारी छ। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार निर्माणका लागि भेटघाट र छलफल जारी राखेका छन्। मंगलबार मात्र सत्ता समीकरणबारे तीन दलका शीर्ष नेताहरूमा छलफल भएको छ।
मंगलबार अपराह्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा उनीहरुबीच सत्ता समीकरणकै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव र डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।
उनीहरूले सरकारको नेतृत्व लिन काँग्रेस अग्रसर नभए आफूलाई साथ दिन पनि देउवालाई आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले उनीहरूसँग सरकार बन्ने आधार मागेका थिए। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँको पार्टीभित्र एकमत छैन। तपाईंहरु एक भएर नआएसम्म कसरी सरकार बन्छ ? सङ्ख्या पुग्छ ?’
जवाफमा डा. भट्टराईले ‘त्यसको चिन्ता नगर्न’ भनेका थिए। विगतमा ओलीसँग सुशील कोइराला पराजित भएको घटना पनि देउवाले उनीहरूलाई स्मरण गराएको स्रोतको भनाई छ। तत्कालीन माओवादी नेता भट्टराई पक्षका सांसदले ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने चर्चा थियो। तर ओलीले ३ सय ३८ मत पाएका थिए भने कोइरालाले २ सय ४९ मत पाएका थिए।
त्यति बेला काँग्रेसले ३ सय ६० मत पुग्ने दाबीसहित कोइरालालाई अगाडि सारेको थियो। देउवाले भट्टराईलाई त्यही घटना सम्झाएका थिए। तर यति बेला काँग्रेस इमान्दार भएर नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिए सरकार बन्न गाह्रो नभएको भट्टराईको भनाइ थियो।
जसपामा सत्ता समीकरणमा दुई धार देखिएका छन्। जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैतिर तानातानमा परे। यद्यपि नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा पार्टीभित्र दुई कित्ता देखियो। एउटा कित्ताको नेतृत्व ठाकुर र अर्को कित्ताको नेतृत्व यादवले गरेका छन्। सत्ता समीकरणको निर्णायक बनेपछि जसपा आन्तरिक विवादमा फसेको छ। पार्टीका दोश्रा तहका नेताहरू पनि दुई धारमा बाँडिएका छन्। यद्यपि जसपालाई अहिले दुवैतिर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव आएको छ।
जसपा सत्ता समीकरणको साँचो बनेपछि उसले उठाएको माग पूरा गर्न वर्तमान सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कुनै बेला तराई मधेस केन्द्रित दलहरू उठाएका मागको बारेमा सुन्नै नचाहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले जसपाले उठाएका माग पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सत्ता जोगाउन ओलीले अहिले जसपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग निकटता बढाउँदै गएका छन्। उनले ठाकुरलाई बोलाई बोलाइ भेट्ने गरेका छन्।
यसै गरी, उपसभामुखलगायत संवैधानिक आयोगमा भागबण्डा गर्न समेत प्रधानमन्त्री तयार भएको जसपाका एक नेताले दाबी गरे। सत्ता समीकरणमा मुख्य भूमिका देखिएका जसपा अध्यक्ष यादव र ठाकुर दुवैलाई दुवै पक्षले सत्ता समीकरणमा प्रस्ताव गरेका छन्। यादव माओवादी केन्द्रसँग निकट देखिएका छन् भने ठाकुर ओलीसँग निकट देखिएका छन्। दोस्रो ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले पनि जसपाँसग छलफल र संवाद अघि बढाएको छ। वर्तमान ओली सरकारलाई ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन काँग्रेसले जसपासँग प्रस्ताव राखेको छ।
प्रतिनिधिसभामा जसपाको ३४ जना सांसदको उपस्थिति छ। ३४ मध्ये दुई जना सांसद रेसम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। जसपाका अर्का कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा प्रदेश २ सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले भने जसपाले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयन नभएसम्म यो पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलन जारी रहने बताए। मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सरकारको नियमित कामभित्र पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधनलगायतका हाम्रो मुख्य एजेन्डा अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छन्। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन जारी छ।’ माग पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारबाट पार्टीले आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए।
जसपा दुई धारमा बाँडिएपछि नयाँ सरकार निर्माणको सन्दर्भमा काँग्रेस स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि शुक्रवार काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न तीन दलको औपचारिक बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा सभापति देउवाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ। तर जसपाले यसबारे छलफल गर्न थप समय मागेको छ। उक्त विषयमा जसपा अहिले निरन्तर छलफलमा छ।
जसपा स्रोतका अनुसार ओली सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा पार्टी शीर्ष नेताहरू सहमत छन्। ओलीलाई जति दिनसम्म टिकाइ राख्ने हो, लोकतन्त्रमाथि त्यति नै खतरा हुने भएकोले सरकारको विकल्प दिनुपर्नेमा उनीहरू एकमत छन्। अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी दुवै पक्ष सहमतिको विन्दुमा आएका हुन्। तर कसलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने भन्नेचाहिँ जसपाले टुंग्याएको छैन।
यद्यपि देउवासँग मंगलबार भएको भेटमा यादव र डा. भट्टराईले आफूहरू सरकारको विकल्प दिन तयार रहेको बताएका हुन्। यादव र डा. भट्टराईसँगको भेटपछि मंगलबार राति नै देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका छन्। यादव र डा. भट्टराईको कुराकानीपछि देउवा र प्रचण्डबीच भएको वार्तालाई अर्थ पूर्णरुपमा हेरिएको छ। तर देउवा र प्रचण्डबीच भएको वार्ताको भित्री कुरा गोप्य राखिएको छ।
देश बचाउन राष्ट्रिय मुक्ति सेना गठन गर्नुपर्ने हुन सक्छ : देव गुरुङ
अभिनेत्री स्वेतालाई पति शोक